प्याब्सनका तीन हस्ती, जो चुनाव अगावै विजयी बने -
प्याब्सनका तीन हस्ती, जो चुनाव अगावै विजयी बने
९ चैत्र २०७८, बुधबार ०९:२६ March 23, 2022 khullapatiLeaveaComment on प्याब्सनका तीन हस्ती, जो चुनाव अगावै विजयी बने
काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)को महाधिवेशनले तीन पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन ग-यो । अध्यक्षमा डिके ढुंगाना, महासचिवमा आरबी कट्वाल र कोषाध्यक्षमा सन्तोषमणि न्यौपाने सर्वसम्मत चयन भएका हुन । १५ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षमा अरुको मनोनयन नपरेपछि उनीहरु सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । ढुंगाना उनी यसअघि सहअध्यक्ष थिए भने कटुवाल उपमहासचिव थिए । केन्द्रमा यी तीन हस्ती सर्वसम्मत चुनिएका छन भने प्रदेश लगायतमा पनि सर्वससम्मतिको प्रयास भैरहेको प्याब्सनले जनाएको छ ।
प्रदेशअन्तर्गत उपाध्यक्षमा बागमतीबाट थकिनकुमार गुरुङ र कर्णालीबाट नैनसिंह खत्री निर्विरोध चयन भएका छन् ।
अन्य पदाधिकारीमा सर्वसम्मत नभएपछि चुनावी प्रक्रियामा जाने प्याब्सनले जनाएको छ । सहअध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सहमति हुन सकेको छैन । सहअध्यक्षमा ईश्वरबहादुर गुरुङ र आशिष श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद अधिकारी, गोपाल आचार्य र दीपिका थापाको उम्मेदवारी परेको प्याब्सन निर्वाचन समितिले जनाएको छ । सचिव र सहकोषाध्यक्षमा पनि सहमति भएको छैन । महाधिवेशनले तीन वर्षका लागि ६५ सदस्यीय कार्यसमति चयन गर्नेछ ।
प्याब्सनको १५ औँ महाधिवेशन आज
खुल्लापाटीमा खुल्ला बहस : अबको शैक्षिक गन्तव्य के होला? (भिडियोसहित)
१० बैशाख २०७७, बुधबार १४:५१ April 26, 2020 khullapati
कोरोना भाइरस : १ करोड ५ लाख बढी संक्रमित
१७ असार २०७७, बुधबार ०७:५२ July 1, 2020 khullapati
१९ असार २०७७, शुक्रबार ०८:५८ July 3, 2020 khullapati
कोरोना महामारीमा पनि सक्रिय बनेको नेपाली फुटबल ९ चैत्र २०७८, बुधबार ०९:२६
एन्फामा कर्माछिरिङको चार वर्ष, फुटबल खेलमा भयो के ? ९ चैत्र २०७८, बुधबार ०९:२६
प्याब्सनको कडा निर्देशन लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक पत्रविना भर्ना गरे सदस्यता रद्ध हुने ९ चैत्र २०७८, बुधबार ०९:२६
नेक्ससमा हेल्थ क्याम्प, सबैले निःशुल्क जँचाउन पाउने ९ चैत्र २०७८, बुधबार ०९:२६
प्याब्सन नयाँ कार्यसमितिले अघि सारेका १३ बुँदा के हुन ? ९ चैत्र २०७८, बुधबार ०९:२६